ထက်ထက်မိုးဦး က မအေးသူစံ အား တောင်းပန် မှု မပြု နိုင် စစ်အစိုးရ ဥပဒေ လမ်းကြောင်း အတိုင်း ချီတက်မည် ဟု ဆို | Freedom News Group
ထက်ထက်မိုးဦး က မအေးသူစံ အား တောင်းပန် မှု မပြု နိုင် စစ်အစိုးရ ဥပဒေ လမ်းကြောင်း အတိုင်း ချီတက်မည် ဟု ဆို
by FNG on June 1, 2010	ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်တွင် ပါးရိုက်မှု ဖြစ်ပွားသည့် နေ့ က မင်းသမီး ထက်ထက်မိုးဦး အား ဓာတ်ပုံဆရာ အောင်စိုးနိုင် မှ မှတ်တမ်းတင် ထားစဉ် Updated ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးနှင့် 7day ဂျာနယ် သတင်းထောက် မအေးသူ စံ တို့ ၏ အမှု အား မြန်မာ
နိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်း အရုံး မှ ၀င်ရောက် ဖြန်ဖြေပေး ရန် စီစဉ် သော် လည်း ထက်ထက်မိုးဦး က ငြင်းဆန်လိုက်
ပြီး ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး အဆိုပြုထားသည့် လူသိရှင် ကြား တောင်းပန် မှု လမ်းကြောင်း ကို သူမ မလုပ် နိုင်ဟု
ရန်ကုန် အခြေစိုက် စာနယ်ဇင်း သမား တစ်ဦးက ၂၆ ရက်နေ့ က ထက်ထက် မိုးဦး နဲ့ ရုပ်ရှင် အစည်း အရုံး က
တာဝန် ရှိ သူတွေ တွေ့ ကြတယ်။သူတို့ က ပြောတယ် စာနယ်ဇင်း ဘက် ကနေ အေးသူစံ နဲ့ တွေ့့တယ်ပေါ့။
ထက်ထက် က လူသိရှင် ကြား တောင်းပန်ပေးမယ် ဆိုရင် ကျေနပ် မယ် ပေါ့ လို့ ပြောတော့ ။သူက
အန်ကယ်တို့လာတာ ဒီကိစ္စ အတွက် လား၊ဒါဆို ကျွန်မ က ဆောရီးပါ သူ ကျွန်မ ကို တရား စွဲ ထားတယ်လေ
တရား ဥပဒေ အတိုင်း သွားကြတာ ပေါ့ တရာ ကိုယ် နတ် စောင့် ပါတယ်၊ထက်ထက် ဘက်မှာ အမှန်တရား ရှိ တယ် ၊
လို့ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့သည် ဟု ပြောသည်။
ထက်ထက် မိုးဦး အား မြန်မာ နိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်း အရုံးမှ သွားရောက် တွေ့ ဆုံ သည့် နေ့ သည် မေလ ၂၄ စတင်
ကြားနားမှု အပြီး မေ လ ၂၇ ရက်နေ့လိုပြ သက်သေ များ အား ကြား နာမှု မစတင် မှီ တွင် ဖြစ်သည်။
ရန်ကင်း တရားရုံး က ထက်ထက်မိုးဦး နှင့် သတင်း ထောက် အမှု အား ဇွန် လ ၃ ရက်နေ့ သို့ ရုံးချိန်းပေးထားသည်။
ထိုနေ့ တွင် ရန်ကင်း တရား ရုံးသို့သူမ၏ ပရိသတ် မြောက်များ စွာ လာနိုင်သည်
ဟု ထက်ထက်မိုးဦး နှင့် နီးစပ် သူ များ ကဆို သည်။
ဖြန်ဖြေရေး အတွက် ရည်စူးရေးဆွဲ ထားသည့် ကာတွန်းပုံ - ဖေ့ဘွတ် မှရသည် ဆွဲသူအမည် မသိပါ ထက်ထက် မိုးဦး က မြန်မာ နိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်း အရုံး ၏ ကြားဝင် ဖြန်ဖြေချက် ကို ငြင်းဆန် လိုက်သည် ကို
စိတ် ပျက် မိကြောင်း အပတ်စဉ် သတင်း ဂျာနယ် မှ အယ်ဒီတာ တစ်ဦး က Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
သူက ကြားက အေးရာ အေး ကြောင်း လုပ် ပေး တာ ကို ငြင်း တယ် ဆိုတော့ သူ့ မှာ ဘယ်အား
ကိုး ရှိ နေ လို့ လဲ မသိ ဘူး ဟု ပြောသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်း အရုံး နှင့် စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်း တို့ မှ ၀င်ရောက်ရှင်း လင်းသော် လည်း ထက်ထက်မိုးဦး က တောင်းပန်မှု မပြုခြင်း ကို စာပေ နှင့် စာနယ်ဇင်းမှ ရှုံ ချထားသည့် ကြေညာချက် ပေးပို့ သူ၊ ၊ပြည်တွင်း စာနယ်ဇင်း မှ တာဝန်ရှိ သူများ ရန်ကုန် မြို့ မှ ဓာတ်ဆီဆိုင် ၀န်ထမ်း တစ်ဦး က မူ ဒီအမှု မှာ ထက်ထက်မိုးဦး မှား တယ် ဆိုတာ
သိတယ် ဒါပေမယ့် ဂျာနယ် တွေ က လည်းသူတို့ ကိုယ် သူ တို့ငါဘာကောင် လဲ သိလား ဘာညာ
နဲ့ဖြဲ ခြောက် ထား တွေ ရှိ တော့ ထက်ထက် ဘက် က ပဲ လိုက်မယ်ဟု ပြောသည်။
အရင် ပြည်တွင်း ဂျာနယ် မှာ လုပ်သွားပြီး နောက်ပြပ မီဒီယာ မှ သတင်းရေး အခု အနောက်နိုင်ငံ
မှာ အခြေချတဲ့ ငါးဖောင် ရိုး ခေါ် ကျီးကန်း ဆိုရင် အရက်ဖိုး မပေး ရင်ကောင်းကောင်း မရေး ဘူး
ဟု ဒါရိုက် တာ တစ်ဦး က ပြန်ပြောင်း ပြောပြသည်။
ရပ်ကွက် ထဲ တွင် ပြောကြား နေ သော ဟာ သစကား များ အရ ထက်ထက်မိုးဦး အမှု ကို ကိုင် သည့် တရားသူကြီး သည်
စီရင် ထုံး နှင့် အမှု သွား အမှု လာ ကို ကြည့် ပြီး ဆုံး ဖြတ်ရမည့် အစား ဘလောက်၊၀ဘ်ဆိုတ် ၊ဖေ့ ဘွတ် စသည် တို့ ပေါ်တွင်
ရေးထားသည့်ကော်မန့် နှင့် ထင်မြင် ချက် များ ကို မှု တည် ၍ စီရင် ဆုံးဖြတ် မည် ဟု ဆိုသည်။
ထက်ထက် မိုးဦး နှင့် သတင်းထောက် အမှု အား မြန်မာ လူငယ် တို့ အသုံးများ သည့် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် ရေးသား
ဝေဖန် မှု များ ပြုလုပ်ကြ ရာ နိုင်ငံတကာ ရောက် မြန်မာ များ နှင့် လူကြီး လူငယ် မရွေး ပါဝင် ဆင်နွှဲ ကြသည်။
သတင်းထောက်များ ၏ မေးခွန်း များ ကို ဟန့် တား လို သော အားဖြင့် စစ်အစိုးရ ဥပဒေ၊ ထက်ထက်မိုးဦး ဘက်မှ ရပ်လိမ့် မည် ဟု
အကယ်ဒမီ ဆုရှင် တို့ ခန့် မှန်း ကြသည်။
နံပါတ် ၁ နေ ရာ တွင် ချိတ် နေ သည့် Sex and the City2 ကို ဖြုချပြီး လူကြိုက်များ နေသည့် Shrek Forever After About these ads
From: ဖျော်ဖြေရေး, ပြည်တွင်းသတင်း	← အစ္စရေး ဆန့် ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှု မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိ
နော်ဝေ ၀န်ကြီး မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ ရောက်ရှိ →
ထက်ထက်ပုံကြီးကလဲဘုတ်ပြဲကြီး၊၊ မလှလိုက်တာ၊၊ ခေတ်မရှိတော့တာလဲမပြောနဲ့ ၊၊
June 15, 2010	universe	#
June 16, 2010	people	#
June 11, 2010	:D	#
ကွန်မန့်ပေးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတို့အားလုံး ကို ကိုယ့်ကွန်းမန့်တွေမှာ ဘယ်သူတွေဘယ်လိုထောက်ခံထားလဲ ဘယ်သူတွေထောက်မခံကြဘူးဆိုတာကို ပြန်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်….. လူတွေလက်မခံတဲ့ကိစ္စတွေကို မပြောသင့်ပါဘူးခင်ဗျာ…
June 10, 2010	zawzaw	#
ကွန်မန့် တွေကတော့ ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ် .. သတင်းထောက်နဲ့မင်းသမီးကတော့့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်ကြလဲမသိဘူး .. နှစ်ဖက်ပရိတ်သတ်ကတော့???????
ဘယ်သူနိုင်မယ် ဘယ်သူရှုံးမယ်ဆိုတာ တရားသူကြီးပဲသိတယ်ကိုယ်တိုင်သာသွားမေးကြတော့ ဗျို့အင်တာနက်ပေါ်မှာရန်မဖြစ်ကြနဲ့ကိုယ့် လူမ်ျိုးအချင်းချင်း မင်းသမီးလဲလူ သတင်းထောက်လဲလူ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးလဲ လူ တွေ ပဲ အမှားလဲရှိမယ်အမှန်လဲရှိမယ် နှစ်ဖက်စလုံးမိန်းမသားတွေပါ သူတို့ ချင်းချင်း စာနာကြမယ်ထင်ပါတယ် … လူကို လူအချင်းချင်း ဆုံးဖြတ်ပေးတာ ဆိုတော့ မှန်းရခက်တယ် .. သူတို့ ကံတရားပေါ့ ဗျာ .. တပိသာချင်းတော့တူတယ် သံ နဲ့ မှို့ ဖြစ်နေတယ် ဘယ်သူကဘာ လဲတော့ မသိဘူးနော်
June 10, 2010	ညီ	#
June 9, 2010	nang	#
သူဇောတ်လမ်းတွေဒီလောက်ရိုက်ထားတာ အတွေ့အကြုံရှိပါတယ် သူများသားသမီးပါးသွားရိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယလိုခံစားရမလဲမင်းသမီးဖြစ်တဲ့သူကပိုသိမှာပေါ့
ခုပိုတောင်မုန်းသွားပြီ June 9, 2010	FireFighter	#
ဟိုမှာ ဈေးတွေ မီးလောင်နေ တာ ၀ိုင်းဝန်းအကြံပေးကြပါဦး
June 7, 2010	ko pho theat	#
who know detail about htet htet moe oo, she is very rude, very proud,home servents are change every week in her home.her divoce with her husbands is most problem about her rude and her proud. her dady , her brothers are cant live with her cause of her rude.
June 6, 2010	mg mg kyaw	#
mg mg kyaw :
ထက်ထက်မှားတယ်ဗျာ။ နှိမ်လုံးတွေမေးတယ်ထင်ရင်မဖြေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဘာလို့ အစက အလိုတူ အလိုပါ သဘောတူလက်ခံပြီး အဗျူးခံရတာလဲ။ သဘောမတူဘဲ အမေးခံရရင် စော်ကားတာ။ သဘောတူလက်ခံပြီးမှ အမေးခံရရင် စော်ကားတာ မဟုတ် ဘူး။ မီဒီယာသမားမှာ မေးပိုင်ခွင့်ရှိလို့မေးတာပဲ။ မီဒီယာဆိုတာ ပရိသတ်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ပရိသတ်တွေက အေးသူစံမေး တဲ့မေးခွန်းမျိုးကို သိချင်လိုက်ကြတာမှ ရင်ထဲမှာ ကလိကလိကိုဖြစ်နေတာ။ ဒါကို ထက်ထက်က ဘာလို့ စိတ်ဆိုးရတာလဲ။ ဘာလဲ မင်းသမီးဆိုတာ ပရိသတ်မျက်ကွယ်မှာ လင်ကောင်မပေါ်တန်း ကဲချင်တိုင်းကဲမယ်။ ဒါကို မီဒီယာက လာမေးရင် စော်ကားတယ်လို့ ပြောလို့ရမလား။ စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ ထက်ထက်ရေ။ အချိန်မီတောင်းပန်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စန်းတက်နေသလား။ စန်းကျနေပြီလားဆိုတာလည်း ပြန်ကြည့်ပါဦး။ မကြာမီ လာမည် မျှော်…ထက်ထက်ရဲ့ ကျဆုံးဆန်း။ ပုံ မိုးကြိုး။
June 5, 2010	mg mg kyaw	#
ထက်ထက်မှားတယ်ဗျာ။ နှိမ်လုံးတွေမေးတယ်ထင်ရင်မဖြေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဘာလို့ အစက အလိုတူ အလိုပါ သဘောတူလက်ခံပြီး အဗျူးခံရတာလဲ။ သဘောမတူဘဲ အမေးခံရရင် စော်ကားတာ။ သဘောတူလက်ခံပြီးမှ အမေးခံရရင် စော်ကားတာ မဟုတ် ဘူး။ မီဒီယာသမားမှာ မေးပိုင်ခွင့်ရှိလို့မေးတာပဲ။ မီဒီယာဆိုတာ ပရိသတ်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ပရိသတ်တွေက အေးသူစံမေး တဲ့မေးခွန်းမျိုးကို သိချင်လိုက်ကြတာမှ ရင်ထဲမှာ ကလိကလိကိုဖြစ်နေတာ။ ဒါကို ထက်ထက်က ဘာလို့ စိတ်ဆိုးရတာလဲ။ ဘာလဲ မင်းသမီးဆိုတာ ပရိသတ်မျက်ကွယ်မှာ လင်ကောင်မေပ်ါတန်း ထင်ရာလုပ်မယ်။ ဒါကို မီဒီယာက လာမေးရင် စော် ကားတယ်လို့ ပြောလို့ရမလား။ စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ ထက်ထက်ရေ။ အချိန်မီတောင်းပန်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စန်းတက်နေသလား။ စန်းကျနေပြီလားဆိုတာလည်း ပြန်ကြည့်ပါဦး။ မကြာမီ လာမည် ထက်ထက်ရဲ့ ကျဆုံးဆန်း။ ပုံ မိုးကြိုး။
June 5, 2010	may	#
“မီဒီယာဆိုတာ ပရိသတ်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်” ဆိုရင် တကယ်သိချင်တာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
၁။ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် စိုင်းစိုင်း နဲ့ ဖိုးလပြည့် သတင်း
၂။ မိုးဟေကို ရဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုအကြောင်း
ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံက နူကလီးယားစက်ရုံအကြောင်း ၊ မီးမလာရတဲ့အကြာင်း
အဲတာလေးတွေ သိချင်ပါတယ်။ Professional ကျကျ (မမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းမရှိလို့ပြောခဲ့ဖူးလို့) ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားကိုယ်စားပြုတဲ့ “မီဒီယာ”ကနေမေးမြန်းစုံစမ်းပေးပါ။ ဒါကိုသိချင်တာမှ ရင်ထဲမှာ ကလိကလိကိုဖြစ်နေတာ။
ထက်ထက်က သူ့အကြောင်းနဲ့သူအနားယူနေမှန်း ထက်ထက်ပရိတ်သတ်က သိပြီးသားပါ၊ အနုပညာလောကမှာ “ထက်ထက် ထက် ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ ၀င်ရောက်နေရာယူ” နေမှန်းလည်းသိပါတယ် ဒါပေမဲ့ လည်း ထက်ထက်ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကို အခုထိစောင့်မျှော် ကြည့်ရှု့နေဆဲပါ။အဆုံးစွန်ပြောရရင် ထက်ထက် အနုပညာအလုပ်မလုပ်တော့ရင်တောင် ရင်ထဲမှာကျန်ရစ်ခဲ့ဦးမှာ။
နောက်ပြီး ကျမတို့နိုင်ငံကလူငယ်တွေအားလုံးနီးပါး “ခေတ်ပညာတတ်ဘွဲ့ရ” တွေကြီးပါပဲ ၊ အချိန်တန်ရင် စာမေးပွဲအောင်ပြီး ဘွဲ့ရကြပြီးသားပါ။ အင်တာနက်ဆိုင်ဆိုတာလည်း နေရာတိုင်းလိုလိုမှာရှိပြီး လူတိုင်းနီးပါး လက်လှမ်းမှီကြပါတယ် အဲတာ ဘာများထူးခြားလုိ့ “သဘောပေါက်” ဆိုပြီး ပြောရတာပါလိမ့်?????
အရင်တုန်းကတော့ ကျမလေးစားရတဲ့ သတင်းထောက်တွေရှိပါတယ် သူတို့ရဲ့ အင်တာဗျုးတွေပါလာပြီဆို မလွှတ်တမ်းဖတ်ပြီး “အမေးအမြန်းသိပ်ကောင်းပါလား” ဆိုပြီးအတုခိုးပါတယ်..ခုတော့ အင်တာဗျုးကဏ္ဌဆိုအပေါ်ယံပဲကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှပဲ ဖတ်ဖြစ်တော့တယ် ။ “အင်တာနက်နဲ့ကမ္ဘာပတ်နေတဲ့ ခေတ်ပညာတတ်ဘွဲ့ရ လူငယ်” တွေဆိုလို့ပါ။ (မပြည့်တဲ့အိုးလို ဘောင်ဘင်မခတ် ဟောင်ဖွါဟောင်ဖွါမလုပ်ပဲ အလုပ်နဲ့သက်သေပြတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်)
အဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ လက်ခံလိုက်တာကို အပေါစားမေးခွန်းတွေမေးပြီး စော်ကားနေတာကို MEDIA ဆိုတာကြောက်ပြီး ပြုံးပြ ခေါင်းငုံ့ခံခဲ့ရမှာလား !!!!!!!
June 6, 2010	အျမှန်တရား	#
June 5, 2010	Jew	#
Hi! Juliet, can I pronounce your name ” Jew Lee Yet”? Jew = Israeli?
နိုင်ငံတကာ ဥပဒေကို အားကိုးတဲ့သူကြီး..
ပါးစပ်နဲ့ပဲ ကြိုက်သလောက် ထိုင်ဆဲနေလိုက်ဦးမယ်..
…..မနဲ့ …..ခေါင်းနဲ့ ရပြီး မွေးထားတဲ့သား
Ps; မိုက်ရိုင်းတာ မပါဘူးနော် .. cancel မရဘူးနော်…:)
June 4, 2010	သတင်းထောက်	#
ထက်ထက်ကမှားတယ်ဆိုရင် အေးသူစံလည်းမှားတာပေါ့ သူကသာ မမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းတွေ မမေးမိရင် ဒီပြသနာကဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလေ လူတိုင်းနားလည်းမှာပါ လက်ခုတ်နှစ်ဖက်တီးမှာ မည်တာပါ သူတို့တွေ အားလုံး မှားကျတာပါပဲ ဒါပေမယ့် ဘေးကနေ သွေးထိုးမပေးကျဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ လူလူချင်း စာနာထောက်ထားတက်ရင် အရာအားလုံး အစဉ်ပြေမှာပါ ကိုယ့်ကိုလည်း မမေးစေချင်တဲ့ မေးခွန်တွေမေးရင်ကော ကြိုက်ပမလားဆိုတာ အရင်ဆုံးတွေးပီးမှာ ပြောသင့်တာကိုပြောကျပေါ့ဗျာ အေး မေးတဲ့သူကတောင်းပန်ပီးပီဟာကိုလည်း အမေးခံရသူက ကျေနပ်သင့်တာပေါ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မျှတွေးရင် အရာအားလုံး အစဉ်ပြေသွားမှာပါ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သူဘက်မှ မလိုက်ဘူး ဒါပေမယ့် မီးလောင်ရာလေပင့်ပေးသူတွေကိုတော့ အားနေရင်လည်း ထောင်ထည်ကိုသွားလို့ပြောခြင်ပါတယ် ရဲဘက်မှာ လူတွေလို့နေလို့တဲ့ ကျွန်တော်က ထောင်ထဲကိုပို့ပေးရတဲ့ တရားသူကြီးလည်းလုပ်တယ်လေ
June 4, 2010	Juilet	#
ထက်ထက် ကျရုံးတာ အောင်မြင်တာအတွက် ပူပေးစရာမလိုပါဘူး.
ပြောတော့ (ကမြင်း) သလေးဘာလေးနဲ့ .ထက်ထက်သတင်းတွေ့တော့ ၀င်ဖတ်ပြီး comment တောင် ၀င်ပေးနေလိုက်သေးတယ်.
ထက်ထက်ကသာ သူ့ကို ပြန်ကြိုက်ကြည့်ပါလား..မိုးမမြင်လေမမြင်တောင် ဖြစ်နေဦးမယ်.
လူတွေက ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ သူများရနေတော့ မနာလိုဖြစ်နေကြတာ.
ထက်ထက် (ကမြင်း) တာကို ပြောမနေနဲ့. နင့်မိန်းမ ဗိုက်ကြီးနေတုန်း နင်ကမြင်းကြောမထမိစေနဲ့ (နင့်မိန်းမက နှလုံးရောဂါမရှိဘဲ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျရင် ပြောစရာမရှိဖြစ်နေဦးမယ်)
June 4, 2010	True	#
နှစ်ဖက်စလုံးကမှားတယ်လို့တော့မပြောချင်ပေမဲ့ သူများရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အသုံးချတယ်ဆိုရင် အဲဒီလူက အောက်တန်းကျတာပေါ့။ ဂျာနယ်တော်တော်များများဝယ်ဖတ်မိရင် ပိုက်ဆံကုန်သွားဘဲအဖတ်တင်တယ် ဘာမှလည်းဗဟုသုတ၊ ရသတွေမရဘူး။ အတင်း၊ အဖျင်းတွေဘဲရတာများတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဂျာနယ်တစ်ချို့ကို ပန်ကြားချင်ပါတယ်။ သတင်းစစ်သတင်းမှန်တွေကိုဘဲ ပြည်သူတွေလိုလားပါတယ်ဗျာ
June 4, 2010	Observer	#
ထက်ထက်ရေ ဘာမှအားမငယ်နဲ့ ကိုယ်က လက်လွန်သွားပေမဲ့လဲ အမေပေးတဲ့ ရွှေခွက်လေးရင်းပြီး ကာကွယ်လိုက်ရင် အမှုနိုင်မှာပါ။
လူ့စကား သူမသိ သနားပါဘိ။ animal တွေမို့ ထက်ထက်ဘက်ကပါတာလေ။
အမြင်မတော်လို့ ဝင်ပြောမိတာ အမှန် နောင်တရမိပါတယ်။အယူအဆမတူရင်လဲ ခင်ဗျားတို့ဝါဒအရ ခွင့်လွှတ်ပေးပါလား။
ဘာလဲ မင်းသမီးမဟုတ်တော့ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တော့ဘူးလား။
ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်စံတွေကို ချိုးဖေါက်လို့ ကဲ့ရဲ့တာ၊ အကြမ်းဖက်ရိုင်းစိုင်းတာကို ရှုံချတာတွေဟာ ကိုယ်ပါဝင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ ပဲ့ပြင်တာ၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တာ၊ လို့ယူဆပါတယ်။
မအေးသူစံမေးတဲ့ မေးခွန်းထဲမှာ ရိုင်းတဲ့စကား တစ်လုံးမှမတွေ့ရပါ။ မင်းသမီး လိမ်မာလျှင် လှလှပပဖြေလိုရတဲ့ မေးခွန်းမျိုးပါ။
by the way လူမှားနေပြီထင်တယ် ခင်ဗျားသားနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်နေလို့လား —-သားလို့ခေါ်နေတာ။
ကိုယ့်စကား ကိုယ်မသိ၊ —-သားခေါ်သူ မင်းအဖေ —-ဖြစ်နေ၏။
ှဆဲချင်သလောက်သာဆဲ နောက်ထပ် ဆွေနွေးရန်မသင့်ဟု ယူဆပါသည်၊ ဆွေးနွေတော့မည်မဟုတ်ပါ။။။
June 4, 2010	kay	#
အားနည်းချက်တွေများတဲ့ မင်းသမီးမို့ ငါတို့ရေးချင်သလိုရေးမယ်၊ လုပ်ချင်သလိုလုပ်မယ် ဆိုတဲ့ မကောင်းမမြင်တတ်တဲ့ idears တွေနဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တချို့ကြောင့် ဂျာနယ်နစ်လောကကို လူတွေစက်ဆုပ်တော့မယ်…အင်းးးးး…
ထက်ထက်မိုးဦးကို တည်ကြက် လုပ်ပြီး ဂျာနယ်လစ်တွေ လုပ်စားနေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်… ထက်ထက် ကျရုံးတာ အောင်မြင်တာအတွက် ပူပေးစရာမလိုပါဘူး.
ပြောတော့ (ကမြင်း) သလေးဘာလေးနဲ့ .ထက်ထက်သတင်းတွေ့တော့ ၀င်ဖတ်ပြီး command တောင် ၀င်ပေးနေလိုက်သေးတယ်.
June 4, 2010	KToe	#
စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တဲ့အကျင့်က အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ လူယဉ်ကျေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်မဟုတ်ဘူး..
သူတစ်ပါးရဲ့ အားနည်းချက်ကို လိုက်ပြီးနင်းဖို့ကြိုးစားတာလည်း လူရော စိတ်ဓာတ်ပါ အောက်တန်းကျသူတွေရဲ့ အလေ့အထ..
ကိုယ်နဲ့ တန်ရာ.. တန်ရာ.. ဖြစ်ကြတာ.. ဖြစ်ကြမှာ..ပါပဲ..
မေတ္တာစိတ် ခေါင်းပါးနေသမျှ.. အမြဲတမ်း ပူလောင်နေကြရမှာ..
June 4, 2010	bikegyi	#
June 3, 2010	bikegyi	#
ဗမာပြည်မှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့စာတန်းလေး။ (သင်ကောင်းလျှင်ကျွနုပ်မဆိုးပါ)တဲ့။ထက်ထက်လဲမလွန်ပါဘူးလို့မပြောလိုပေမယ့် ကျီးကန်းတွေ
ှဗမာပြည်မှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့စာတန်းလေး။ (သင်ကောင်းလျှင်ကျွနုပ်မဆိုးပါ)တဲ့။ထက်ထက်လဲမလွန်ပါဘူးလို့မပြောလိုပေမယ့် ကျီးကန်းတွေ
June 3, 2010	မင်းအဖေ	#
ထက်ထက် မို့လို့ လက်အနာခံပီး ပါးရိုက်တယ်
ငါသာဆို အဲဒိ သတင်းထောက် အပြန် ကားနဲ့ဝင်တိုက်မှာ
ငါ ရန်ကုန်မှာမနေလို့ ကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့ကွာ
June 3, 2010	kay	#
မမေးပါနဲတော့လို့ တောင်းပန်နေတဲ့ကြားက ဆက်ပြီး မေးနေတဲ့ဂျာနယ်လစ်အကြောင်းကိုတော့ ဘာမှမရေး၊မဖော်ပြပဲနဲ့ မင်းသမီးကိုတော့ရိုင်းတယ်ပြောပြီး မင်းသမီးကို တောက်ခံတဲ့ လူတွေကိုတော့ animals နဲ့နှိုင်းတဲ့ observer ကကော ဘယ်အဆင့်လဲ???
aung gyi :
ထက်ထက်တစ်ယောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ တရုတ်သုခမိန်ထဲက မိုးကြိူးအပစ်ခံ ရတဲ့ ကြိူင်ဝင်းရီ လိုဖြစ်တော့မယ်.. ပေါင်ချိန်သုခမိန်က အဲဒီ မင်းသား ကြိူင်ဝင်းရီကို တရားဥပဒေနဲ့အရေးယူလို့ မရဘူး.. ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကြိူင်ဝင်းရီ မျိူးရိုးက ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ သေမိန့်ပေးလို့မရတဲ့ အမျိူး… ကြိူင်ဝင်းရီက အဲဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ဆင်းရဲသားတွေကို နှိပ်စက်ခဲ့တာ.. နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲ… တရားဥပဒေက ဆုံးမလို့မရတော့ လောကဥပဒေက ဆုံးမလိုက်တာပါပဲ… ခိုင်ဖုံးတရားရုံးထဲက အမှူနိုင်ပြီးထွက်လာတဲ့ ကြိူင်ဝင်းရီကို မိုးကြိူးပစ်လိုက်တာ သေချင်းဆိုးနဲ့သေပါရောလား… ထက်ထက်ကတော့ မိုးကြိူးအပစ်မခံရလောက်ပါဘူး… မသကာ မြွေပွေးအကိုက်ခံရယုံလောက်ပါပဲ… ကြားဖူးမှာပေါ့.. မြွေကိုက်ခံရတယ်ဆိုတာ… မာန်တက်ရင် ဟန်ပျက်တတ်တယ် သတင်းကြီးတဲ့ မင်းသမီးရေ………………..
နန္ဒာလှိုင်နဲ့ မျိုးမျိုးခိုင်တို့ သူများအတင်းပြောကြတုန်းက မျိုးမျိုးခိုင်ဘဲ လူသိရှင်ကြားတောင်းပန်လိုက်ရတယ်..နန္ဒာလှိုင်က မတောင်းပန်ဘူးလေ..ဇေကမ္ဘာ ခင်ရွှေ ချွေးမလောင်းဖြစ်တော့မှာရယ် မောင်အေးနဲ့ ပတ်သတ်ရာ ပတ်သတ်ကြောင်းတွေ ရှိတော့မှာမို့..ဘယ်မီဒီယာကမှ မပြောရဲကြဘူးလေ.. ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းနည်းတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးကျမှ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ တော်တော် တရားကျဘို့ကောင်းတယ်..မိုးတွင်းရောက်လို့ ပြစ်မယ့်မိုးကြိုးက ထက်ထက်မိုးဦးကို ပြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး..သူတပါးကို အကြောင်းမဲ့ဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့ သူတွေကိုဘဲပြစ်မှာ..သူတပါးရဲ့ အားနည်းချက်ကို ကြည့်ပြီး အပြစ်ပြော အတင်းချနေမယ်ဆိုရင် ..ကိုယ် သူများကို ပြောတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်မိသားစုမှာ ပြန်ဖြစ်မှာဘဲ..၀ဋ်ဆိုတာ လည်တဲ့သဘောရှိတယ်..
June 4, 2010	မောပြေ	#
ထက်ထက်နိုင်မှာလို.ပြောတော. နဂိုကမှမာနကြီးနေတဲ. ဈေးကွက်ပျောက်မင်းသမီးက
မာန်တက်ပြီပေါ.။ သူရဲ.အမေပေးတဲ.ရွှေခွက်ကလဲ ငရုတ်ကျပွေ.ပေါင်းစုံဆေးကြိတ်လို.
သံချေးရောင်လောက်တောင်မတောက်ပြောင်တော.တာကို။ ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ.လဲ လင်
တွေက်ုလျှော်ကြေးပေးရလို.သိပ်ကျန်မယ်မထင်။ ကလေးသေလို.၀မ်းနည်းနေရင် မိဘမဲ.
ကျောင်းလိုနေရာသွားပြီး ပရဟိတလုပ်သင်.တယ်။ VIP ၀ိုင်းကိုလာပြီး စင်ပေါ်မှာစကား
ပြောမယ်သူကို ဆိုတဲ.မာန်တက်တဲ.စကားနဲ. သတင်းထောက်ကိုမစော်ကားနဲ.။ သတင်း
ထောက်တွေက မာန်တက်တယ်ဆိုရင်လဲ သက်သေရှိမှပြော။ မင်းသမီးကရိုင်းလိုက်တာသက်
သေရှိလို.ရုံးရောက်တာ။ အခုမြန်မာပြည်က သတင်းထောက်တွေကမာန်တက်ဖို.နေနေသာသာ
June 3, 2010	may	#
ဒါပေါ့ သတင်းထောက်တွေက သတိနဲ့နေ ၊ သတိနဲ့စကားပြောရမှာပေါ့။ သူများဆီက ကိုယ်လိုချင်တဲ့အဖြေရဖို့ တဖက်လူကိုလည်းမနင်းမိစေဖို့ သတိထားပြီးပြောရမှာပေါ့။ သတင်းထောက်က “ငါ့မြင်း ငါဆိုင်း စစ်ကိုင်းရောက်ရောက်” ဆိုတဲ့အထာနဲ့ ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားတာတွေမေးတယ်လို့လွှဲချ၊ သတင်းထောက်လွတ်လပ်ခွင့် မမေးသင့်တဲ့မေခွန်းမရှိဘူးဆိုပြီး သူတပါးဖြေချင်အောင် ဥာဏ်ကူပြီး ပြင်ဆင်မှု့မျိုးလည်းမရှိပဲ လူပေါင်းစုံလာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲကို ဘလိုင်းကြီးသွားပြီးအတွင်းရေးကိုသွားမေးတာ ဆော်ပလော်တီးခံရတာကို တရားစွဲပြီးဟစ်တိုင်တက်နေမဲ့အစား သင်ခန်းစာတောင်ယူသင့်တယ်။ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကို အပုတ်ချချင်ဇောနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အသုံးမကျတာကိုနိုင်ငံကျော် ကြော်ငြာနေသေးတယ် ဟားဟား ။
“ဈေးကွက်ပျောက်မင်းသမီး” ဖြစ်တာတောင် ချစ်နေတဲ့သူတွေက အများသား … ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ့်ရည် ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့အချစ်ခံရတာတောင် မနာလိုတဲ့သူတွေကရှိသေး။
June 3, 2010	Juilet	#
ကျော်ဆန်းနဲ့ တစ်ည တရားသူကြီးနဲ့၂ည လောက်အိပ်လိုက်ရင် ထက်ထက်နိုင်ပြီ
အောက်တန်းကျတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးခဲ့ပုံရတယ်..ဒါမျိုးတွေပဲမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးတော့ ဒီလိုပဲစဉ်းစားတတ်တယ်ထင်တယ်..ဟုတ်လား.
June 3, 2010	ဇင်မာစိုး	#
မိုက်ရိုင်းလိုက်ကျတာ..ယောကျာ်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ ..မသာမတဲ့ ..တော်တော်ရိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုံးပဲ..အဲဒီလိုရေးတာကို ကြည့်ကတည်းက အဲဒီလူရဲ့အဆင့်အတန်းကို သုံးသပ်လို့ရတယ်..ဒါဆိုရင်ဒီလိုလူတစ်ယောက်က ထောက်ခံပါတယ် ဆိုတဲ့ သူမှာရော..အမှန်တရားဆိုတာ ဘယ်လိုရှိမှာလည်း..နှစ်ယောက်စလုံးမှားတာချင်းတူတယ်ဆိုရင်တောင် ..မဖြေချင်ပါဘူး လို့ ပြောနေတာကို ဆက်မေးတဲ့ သူအမှားက ပိုမဆိုးဘူးလား.ပါးရိုက်ခံရတော့ နာတတ်လိုက်တာ..ပါးရိုက်မခံချင်ရင် ပါးရိုက်မခံရစေတဲ့ မေးခွန်းမျိုးမေးဖို့ အစကတည်းက စဉ်းစားသင့်တာပေါ့ ..အဲသလိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့ အသိစိတ်ကလေးသာရှိရင် အခုလိုအနေအထားမျိုးလည်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး…အခုတော့ ..တိရိစ္ဆာန်တွေမို့ ထက်ထက်ဘက်ကပါတာ ဆိုရင် တိရိစ္ဆာန်ထက်မိုက်ရိုင်းတဲ့ ကောင်တွေကို ဘယ်လိုတင်စားမလည်း..
June 3, 2010	nadi	#
သူတို့ စေ့စပ်ပေးတာ တဖက်သတ်ကြီး..ဒါောကာင့် ထက်ထက်လက်မခံတာပေါ့..
June 3, 2010	sasoeln	#
for My option as according to word form Buddhist that there is6words to speak between human being, among them only2words is recommend to speak like the firt for both side shold be effect above speech and the second is no default to to each other.
June 3, 2010	foreverphyo	#
Dear Ma Aye Su San and Journalists,
Even you are journalist or whatever, you are not support to ask this kind of questions such as personal matters and etc. If you think that you are right to ask, Are you dare to ask to government during their meeting regarding POLITICAL??????
Lesson Learn:- Please do not ask any questions if you will not happy to answer when someone ask same question to you.
Cheer ! ! ! !
June 3, 2010	Observer	#
June 3, 2010	juu	#
June 2, 2010	ကျန်ကျောင်း	#
June 2, 2010	Juilet	#
ကျန်ကျောင်းဆိုတာ ပေါင်ချိန်အောက်မှာပဲ ရှိတယ် ..ဟိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနေတာကို ကလေးအထာတွေနဲ့ ၀င်ခွပ်မနေစမ်းနဲ့
June 3, 2010	ပေါင်ချိန်	#
သူတော်ကောင်းကြီးလဲမဟုတ်ပါဘူး.. Peace All လွန်တာရှိရင်လဲခွင့်လွှတ်ပါ… June 2, 2010	people	#
June 11, 2010	dondon	#
June 2, 2010	ကြောင်ရေချိုး	#
ရန်ကုန် မြို့ မှ ဓာတ်ဆီဆိုင် ၀န်ထမ်း တစ်ဦး က မူ ဒီအမှု မှာ ထက်ထက်မိုးဦး မှား တယ် ဆိုတာ
အသားနာအောင်လုပ်မှစော်ကားတာမဟုတ်ဘူး၊ ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးထားရတဲ့ကလေး ဆုံးသွားတာကို ကိုယ်ချင်းမစာမေးပြီး သူများအားနည်းချက် ကိုဖိနင်းတာကမှ အသည်းပါနာအောင်စော်ကားတာဟေ့
“လစာ ၂ပဲ ၁ပြား” လို့ချွေးနဲ့ရှာတဲ့ကိုယ့်ဝင်ငွေကိုတောင် စော်ကားတယ်မြင် ၊ကိုယ့်သွေးသားကနေဖြစ်တည်လာတဲ့ကလေးဆုံးသွားလို့ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့သူကို တရားစွဲ ပြီး မိန်းမတယောက်ကိုဝိုင်းဟောင်နေတာကရော ဘာတုန်း
ထက်ထက်လက်ပါတာ မှားတယ်လို့မြင်ပေမဲ့ ခုလိုဝိုင်းဟောင်နေတာတွေ့တော့ မခံနိုင်တော့ဘူး
အပေါ်ကနှစ်ခု ကြိုက်တယ်……ဒီမိုကရေစီများရကြည့် ဒီမိုကရေစီရှိတယ်ဆိုပြီး လက်သရမ်း ပါးစပ်သရမ်း ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ လုပ်လွန်းလို့ ချောင်းအသတ်ခံရျွယ့် အထဲ သတင်းထောက်တွေ ရှေ့ဆုံးက….
June 2, 2010	မိုက်တီး	#
ဟုတ်ပဗျာ..ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အဓိပါယ်တောင်မသိဘဲနဲ့များ လက်သရမ်း ပါးစပ်သရမ်းချင်နေကျတယ်..သတင်းသမားတွေ(အနည်းစု)လုပ်ပြီး ကိုယ်တာဝန်ကိုယ်မသိ ဘောင်ကျော်လွန်ချင်နေကျတယ်ဗျာ…အဲ့လို လူမျိုးတွေသာများများရှိခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ နိင်ငံအတွက် ရင်လေးပါတယ်ဗျာ…
June 4, 2010	wingabar	#
June 2, 2010	ယုယမေ	#
ထက်ထက်က မှားတယ် လက်ပါမိလို. ……. စာနယ်ဇင်းတွေကပါ မျှတမှု မရှိတော့ဘဲ အကြင်နာတရားခေါင်းပါးနေတာ မလွန်ဘူးလား…မအေးသူစံကိုတော့သနားမိပါရဲ. … စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်မိတယ် … ကိုယ်ချင်းလဲစာမိပါတယ် …
တကယ်ဆိုနှစ်ယောက်လုံးပုံစံတစ်မျိုးစီနဲ.မှားနေကြတာဘဲ….. ဘာကြောင့် သတင်းထောက်ဘက်ကရပ်တည်ရတာလဲ ရှင်းပါတယ်
သူတို.လူဘက် ကိုဘက်လိုက်တာ ..တကယ်ဆို ဆံပင်ဆွဲပါးရိုက်ခံရတဲ့ သတင်းထောက်မလေးကို သနားနေရမှာ ခုတော့ ……
June 2, 2010	ခင်	#
ထက်ထက်က တရားကို နတ်စောင့်တယ်လို့ပြောတော့ စဉ်းစားကြည့်တယ်၊၊ မြန်မာပြည်ကဥပဒေမှာ နတ်ရှိသလားပေါ့၊၊ မြန်မာပြည်မှာ တရားကိုသာနတ်စောင့်ရင် ပြည်သူ့ ခေါင်းဆောင်၊ အရွေးကောက်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောင်ကျ/ အကျယ်ချုပ် ခံနေရစရာတောင်မရှိဘူး၊၊ အပြစ်မဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားတွေ ထောင်ထဲမှာ ရှိနေစရာတောင် မရှိဘူး၊၊ ဟုတ်တယ်နော်၊၊ တရားကိုနတ်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ တင် ထက်ထက်မှာ ဥာဏ်မရှိ တာသိသွားပြီ၊၊ မှတ်ထား ဘယ်နိုင်ငံမှာ မဆို( ဥပဒေစိုးမိုးမှု့ ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ) လက်ရောက်ကျူးလွန်တဲ့သူကအမှား၊၊
ထက်ထက်ကိုတော့လန်သွားပြီ၊၊ ထက်ထက်ဘက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေရှိမယ်ဆိုတာ သိပြိးသားပါ၊၊ ဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုတာ ကြိုသိပြီးသား ထက်ထက်က ဖြစ်နေလောက်ပြီနော်၊၊ ကိုယ်တွေလည်း မြန်မာပြည်က ဥပဒေ ဆိုတာကြီးကို စောင့်ကြည့်နေတယ်၊၊ နောက်ဆို ကိုယ်မကျေနပ်လို့ ကိုယ့်ကိုစော်ကားတယ်ထင်ရင် နောက်ဆို ထက်ထက်လိုဘဲ ပါးရိုက်ပစ်လိုက်တော့မယ်၊၊ ခပ်အောက်တန်းကျကျပေါ့၊၊
June 2, 2010	ဗိုလ်ချုပ်	#
ခင့်ဘက်မှာရော ဗိုလိချုပ်ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိလဲဟင်။
June 4, 2010	nannan	#
June 2, 2010	ray	#
စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ တရားစီရင်မှူသည် နအဖ တွေနဲ့ နီးစပ်သူသာ အနိုင်ရသည်။ဗိုလ်ချုပ်တွေနှင့်နှစ်ပါးသွားခဲ့ဖူးသော ထက်ထက်အဖို့တော့( တွေးကြည့်ရင်ပြေးကြည့်တာထက်တောင် မှန်ပါတယ်)
န်ုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ လက်ပါသူသာအမှားဖြစ်သည်။
June 3, 2010	မိုက်တီး	#
အီရက်မှာနေ့စဉ် အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေ့အသက်ခံနေရတာ ခင်များရဲ့ပထွေး နိင်ငံတကာ ဥပဒေတွေကဘယ်လိုအရေးတွေယူနေလို့လည်း…
June 4, 2010	smile	#
သားသမီးဆုံးသွားတဲ့ မိခင်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှူကို တွေ့ဖူးပါတယ် ထက်ထက်ကျတော့ ကလေးသေပြီးမကြာပါဘူး တက်လိုက်ရတဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေ ပြင်လိုက်ရတဲ့အလှအပတွေ (အော်တော်တော်ပူဆွေးဝမ်းနည်းနေတာဘဲနော်)ထက်ထက်ကလဲ ဘယ်ဘဝကတက်လာတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ချူးကပ်ပြီး ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ အမှူနိုင်အောင်လုပ်ရင်လဲ နိင်ပါစေတော့။သတိ……….(သေရင်တောင် ငရဲ့ပြည်မှာ ပြည်တန်ဆာမဖြစ်မယ်)။
June 2, 2010	nadi	#
ထက်ထက်ဘယ်ဘဝကတက်လာတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိသလို မင်းသမီးတိုင်းဘယ်ဘ၀ကတက် လာတာလူတိုင်းသိတာပါထည့်ပြောလေ .(သေရင်တောင် ငရဲ့ပြည်မှာ ပြည်တန်ဆာမဖြစ်မယ်)။ သူတော့ မသိဘူး ခင်ဗျားကတော့ ဖြစ်မှာသေချာတယ်
ပူးဆွေးပြီး မပြင်မဆင်နေရအောင် သူကရပ်ကွက်ထဲက သာမန်မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးလေ.
ပွဲလမ်းဆိုတာ ဖိတ်ရင်သွားရမှာပေါ့. သွားမှတော့ အပူရုပ်နဲ့သွားရမှာလား.
ကိုယ်တွေ့ဖူးတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်သေးသေးလေးနဲ့ နှိုင်းနှိုင်းပြီး အတွေးကျဉ်းကျဥ်းလေးတွေနဲ့ ၀င်ဝင်ပြောမနေစမ်းပါနဲ့..
ဘယ်ဘ၀က တက်လာလာ …ဒီဘ၀ထက်ကောင်းတဲ့ ဘ၀ကိုရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာ ကြိုးစားမှုမပါပဲနဲ့မရဘူး.(သဘောပေါက်).
ကိုယ်အမှုဖြစ်ရင်ရော ဗိုလ်ချုပ်နဲ့မသိလို့ သိတဲ့ ရပ်ကွက်လူကြီးအဆင့်လောက်တောင်ပြေးကပ်ချင်နေတဲ့သူတွေကများ..
သူများဗိုလ်ချုပ်နဲ့သိတာ မနာလိုဖြစ်နေသေးတယ်..နင်ပဲ မနာလိုစိတ်နဲ့ အ၀ီစိကိုဇောက်ထိုးဆင်းနေပြီနော် သတိထားဦး..
မှန်လိုက်တာ Juilet ရယ် ဒက်ထိပဲ..
June 3, 2010	ray	#
ကလေးသေတာကိုတော့ ဝမ်းနည်းပါတယ် အဘက်ဘက်ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ သူမက ကလေးသေသွားလောက်အောင် ကိုယ်ဝန်နဲ့ ဘယ်လောက်တောင်(ကမြင်း)ထားသလဲမသိ။သေချာတာက အမှူနိုင်သည်ဖြစ်ဖြစ် ရူံးသည်ဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာအနုပညာလောကမှာ သူမရဲ့ကျရူံးခြင်းဘဲ။
June 2, 2010	may	#
အော်.. အော် နှလုံးရောဂါသည်အမေကမွေးတဲ့ကလေး နှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးတာက ကမြင်းလို့တဲ့လား?? “အဘက်ဘက်ပြည့်စုံကြွယ်ဝ” အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ သူများနဲ့မတူတဲ့ (ကောင်း/ဆိုး) အချက်ရှိလို့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော်ရွှေမင်းသမီးလေးဖြစ်နေတာပေါ့. မလိုအပ်တာတွေ ကြည့်မနေဘဲနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းတဲ့ သားသမီးဆုံးရှုံးရတဲ့မိခင်တယောက်နေနဲ့ပဲ ကြည့်လိုက်ပါ..
ပန်းတိုင်းမှာဆူးရှိပါတယ်၊ တို့ထိချင်ရင်တော့ ဆူးမစူးမိအောင် ဂရုစိုက်ဖို့လိုတာပေါ့။
June 3, 2010	mg mg kyaw	#
ထက်ထက်လွန်တာပေါ့။ ဒီခေတ်သတင်းထောက်ဆိုတာ အရက်ဖိုးရမှရေးတဲ့သတင်းထောက် မဟုတ်ဘူး။ အင်တာနက်နဲ့ကမ္ဘာပတ်နေတဲ့ ခေတ်ပညာတတ်ဘွဲ့ရ လူငယ်တွေဆိုတာ သဘောပေါက်။ နှိမ်လုံးတွေမေးတယ်ထင်ရင် မဖြေနဲ့ ပေါ့။ အစက ဘာလို့ သအလိုတူ အလိုပါ လက်ခံပြီး အဗျူးခံရသလဲ။ အလိုမတူ သဘောမတူဘဲ လာမေးရင် သတင်းထောက်အလွန်။ ထက်ထက်သဘောပေါက်ဖို့က ကိုယ့်မှာစန်းတက်နေသလား။ စန်းကျနေသလား သဘောပေါက်။ ထက်ထက်ရုပ်ပုံလွှာတွေ ဒီ ခေတ်မှာ ဘယ်သူက မရအရ အောက်ကျနောက်ကျခံပြီး လာတောင်းလို့လဲ။ ထက်ထက်နေရာမှာ ထက်ထက် ထက် ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ ၀င်ရောက်နေရာယူထားပြီ။ နောက်ဆို ထက်ထက်က အဖွားကြီး ဖြစ်တော့မှာလေ။ တောင်းပန်လိုက်ပါထက်ထက်ရယ်။ မို့မို့တုန်းကလည်း စကားလေး တစ်ခွန်းအပြောမှားတာကြောင့် လုပ်ငန်းတွေအများကြီးထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မို့ မို့က စာနယ်ဇင်းကို စိတ်နဲ့တောင် ပြစ်မှားခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ခုတော့ ထက်ထက်လုပ်ရပ်က ကမ္ဘာသိ မပြစ်မှားသင့်တဲ့သူ တွေကို ပြစ်မှားလိုက်ပြီ။ ထက်ထက်ဘက်က မာန်မာနကြီး တစ်ခွဲသားနဲ့ တင်းခံနေမယ်ဆိုရင် မကြာမီလာမည်မျှော် ထက်ထက်ရဲ့ ကျ ဆုံးခန်း။ ပုံ တရပ်သုခမိန်ကြီးရဲ့ မိုးကြိုး။
June 5, 2010	people	#
ဘာလဲမ မေး သင့်တာလား ဘာ လား လုပ်စရာလား
ပီးတော့ ခင်ဗျား လခ ၂ပဲ၁ပြားလို့ပြောစရာစောက်ကြောင်းမရှိဘူး
June 11, 2010	aung gyi	#
June 1, 2010	tiger	#
June 1, 2010	Mg tha	#
ကျော်ဆန်း နဲ့ tiger’s mother တစ်ည, တရားသူကြီးနဲ့tiger’s mother ၂ ည.
tiger အမေက ကျော်ဆန်းနဲ့ တစ်ည တရားသူကြီးနဲ့ နှစ်ည အိပ်လို့ ရလာတဲ့သားထင်တယ်နော်..
ခင်များတို့လည်း အမှု့ဖြစ်ဘူးတယ်နဲ့တူတယ်…ခင်များရဲ့အမေတွေအစ်မတွေ့တုန်းကလည်း အဲ့လို့ပဲ
June 4, 2010	Animals	#
June 1, 2010	nadi	#
ဒါထက်ထက်ဘက်က ပါသလိုနဲ့ထက်ထက်ကို အမြင်ကပ်တောင် လုပ်တယ်လို့ ထင်တယ်
June 3, 2010	nayminthitsar	#
ထက်ထက်ဘက်ကပဲ နေမယ်။ ဒါမှ စာနယ်ဇင်းသမားဆိုပြီး ထင်ရာစိုင်းနေတဲ့ သတင်းထောက်တွေ၊ အယ်ဒီတာတွေကို မုန်းတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြလို.ရမယ်။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဆိုပြီး အချိူ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေ တစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ချိူးဖောက်နေတာ ဘာမှ မပြောကြပါလား။ကိုကိုမမစာနယ်ဇင်းသမားတွေရယ်။
June 1, 2010	Librez	#
မေးချင်တာမေး ငါရိုက်ချင်ရင် ရိုက်လို့ရတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာလား မသိဘူး။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ရိုင်းရှိတဲ့သူတွေ များနေပါလား။ အခြေအနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ရှင်းဖို့ ဦးနှောက်သုံးသင့်တယ်။ ဒီကိစ္စကို လုပ်တဲ့သူဘက်က ထောက်ခံမယ့် သူတွေ နောက်ဖြစ်လာမယ့် အခြေအနေကို စဉ်းစားသင့်တယ်။ စီရင်ထုံးကလည်း (အမှန် / အမှား မစဉ်းစားဘဲ) ပရိတ်သတ်များတဲ့ ဘက်ကနေမယ်ဆိုတော့ နောက်ပိုင်း ထောက်ခံမယ့်သူများများရှိရင် လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရပြီ ဆိုတဲ့ ဥပဒေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ *shook head* ထောက်ခံလိုက်တာလည်း ပြည်သူတွေပဲ။ အဲဒီ့အတွက် ခံရတာလည်း ပြည်သူတွေပဲ။ စဉ်းစားဖို့သင့်ပါပြီ။
June 15, 2010	green	#
very good command.
June 3, 2010	people	#
June 11, 2010	မောပြေ	#
တရားရုံးကဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲစိတ်ဝင်စားတာပေါ.။ မင်းသမီးချောလေးနဲ.ယှဉ်တော.သတင်းထောက်က ဇာတ်ပို.ဖြစ်သွားတယ်လေ။ မှန်တာကိုမေးလိုက်တော.စကားနဲ.မယှဉ်နိုင်လို.လက်ပါမိတာကို ဇာတ်လမ်းတစ်ပုပ်အဖြစ်ရေးပြီး ဆဲဗင်းဒေးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်နေပြီပေါ.။ ဒါရိုက်တာကတော. ဟိုကိုကိုလား၊တရားသူကြီးလားပဲ။ သိတယ်…ဒါပေမယ်.။ မမေးနဲ.၊ ဖြေ၀ူးးးးးး
June 1, 2010	argu	#
June 1, 2010	Juilet	#
လူကြီးတွေက လူကြီးဆန်ဆန်ကမ်းလှမ်းပေါ့ ဘာလို့တစ်ဖက်သတ် လူသိရှင်ကြား တောင်းပန်ခိုင်းရတာလဲ..
ထက်ထက်မိုးဦးက ဘလိုင်းကြီး ပါးသွားရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေ..
အေးသူစံက ပါးရိုက်တာကို နစ်နာတယ်ထင်တယ်ဆိုရင် ထက်ထက်ဘက်ကလဲ နှိမ်ပေါက်နဲ့မေးတာကို နစ်နာတယ်ထင်မှာပဲ.
Action ရှိရင် Reaction ဆိုတာရှိတယ်..
June 3, 2010	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,512,763 hits
I saw my reflection inaglass door of Michael Mann studio at Santa Monica, wow I was young enough. Photography by D… lnkd.in/bKVcdAu9hours ago
#Nelson Mandela should born and raise in Utah. lnkd.in/b-mPUbP 10 hours ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishMyanmar's president asks Philippines for more aidMyanmar to allow foreign banks to begin some operations next yearUndergrads return to crumbling Myanmar universityMyanmar's president calls for more investment, development aid from PhilippinesMyanmar refugees face land challenges on returnSpecial Report: Thailand secretly supplies Myanmar refugees to trafficking ringsUS seeks greater Myanmar military trainingUS seeks limited military ties with MyanmarWant Burma info in your inbox each morning?